Posted by pandora at 10:58 AM
လင့်ခ်ကနေဖတ်လိုက်တာ ပန်ဒိုရာ ကတုံးလို့တောင် မှားဖတ်လိုက်မိသေးတယ်။
အရာရာဟာ သူ့ရှုထောင့်ကသူကြည့်ရင် အမှန်တွေ အစစ်တွေချည်းပါပဲ....
ဒါရိုက်တာ မင်းထင်ကိုကိုကြီးရဲ့ ရာဇာနေ၀င်းကလုံးပြီးရင် မပန်ရဲ့ ပန်ဒိုရာကလုံးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ...။
ခေါင်းစဉ်ကို ကမန်းကတန်းဖတ်မိတော့ ”ပန်ဒိုရာကတုံး“ ဆိုတော့ သီလရှင်များဝတ်သွားပြီလားလို့။ ကတုံးလည်းကောင်းတာပါပဲ။ ကလုံးကတော့ ထားလိုက်ပါတော့။ လူတိုင်း ကလုံးချင်နေကြသကိုး။း)
ပန်ဒိုရာကလုန်းလုပ်တာ ကလိမ်ကျချင်လို့ ဖြစ်မှာပေါ့
You dont need to change your clone! Be yourself! :D